Civil Society Groups – အရပ်ဘက် အဖွဲ့အစည်းများ | MoeMaKa Burmese News & Media
Category: Civil Society Groups - အရပ်ဘက် အဖွဲ့အစည်းများ All Categories Bago - ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး Central USA - အမေရိကန်အလယ်ပိုင်း Civil Society Groups - အရပ်ဘက် အဖွဲ့အစည်းများ Educational - ပညာရေးပိုင်း ဆိုင်ရာ Mandalay - မန္တလေးလမ်းးညွှန် Market Place - ဈေးရောင်း ဈေးဝယ် MoeMaKa Network - မိုးမခနဲ့ မိတ်ဆွေများ Religious Center - ဘာသာရေးဆိုင်ရာ San Francisco Bay Area - ဆန်ဖရန်ဘေးဧရိယာ Tour & Travel - ခရီးသွား
Office Address - 561 Merchant Road, Yangon, Myanmar ဖန်တီးရာ သည် လူမှုအသိုင်းအ၀ိုင်းနှင့် တီထွင်ဖန်တီးမှုတို့ ဆုံစည်းရာ နေရာတခု ဖြစ်ပါတယ်။ Phandeeyar is an ICT hub that is designed to support social innovation,...
Burmese Community Services, Inc. 81 Albany St Buffalo, New York 14213 ဘတ်ဖဲလိုးမြို့နေ မြန်မာတိုင်းရင်းသားများအတွက် အခမဲ့လူမှုရေးဝန်ဆောင်မှု ပရဟိတအဖွဲ့ ဖြစ်ပါတယ်။ Phone: 716-533-7027, 716-308-4338 Email: info@burmesecs.org http://www.burmesecs.org/ https://www.facebook.com/Burmese-Community-Services-Inc-713396075340105/...
Address - No.7Quarter, Shwe Bo, Sagaing, Myanmar Shwechinthae Social Service Group (SSSG) HIV/AIDS Care & Support, Blood Donation, Health Education,...
''ဖောင်ဒေးရှင်း'' ၏ မှတ်ပုံတင်ထားသောတည်နေရာဌာနမှာ"ရန်ကုန်မြို့"တွင်ရှိစေရမည်။ အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာ ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အတွင်းဖွံ့ဖြိုးမှု နောက်ကျကျန်ခဲ့သည့် ဒေသများတွင်ရှိ ပြည်သူလူထုများ၏ လူနေမှုဘဝ၊ ကျန်မာရေး၊ ပညာရေးမြှင့်တင်ရေးကိစ္စရပ်များကို ဆောင်ရွက်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ ထူထောင်သူ တဦးမှာ ဒေါက်တာ တင်မာအောင် ဖြစ်သည်။...
>U Win Tin &amp; some Political Prisoners released
>Yan Win (Taung Da Gar) – Myanmar Hlay
>China deports Burmese women sold as surrogate mothers
>34th Annual Ceremony of Hornoring Senior Burmese Cartoonists Held in Rangoon